.အိမ်တိုင်ရာရောက် သိတတ်စွာနဲ့ လာကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာ မင်းသက်စံကို စိန်လက်စွပ် လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ နေတိုး. – Askstyle
.အိမ်တိုင်ရာရောက် သိတတ်စွာနဲ့ လာကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာ မင်းသက်စံကို စိန်လက်စွပ် လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ နေတိုး.
အကယ္ဒမီမင္းသားေခ်ာတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေနတိုးကေတာ့ အႏုပညာေလာကမွာ ထိပ္တန္းမင္းသားတစ္လက္ျဖစ္ၿပီး လူပ်ိဳႀကီးတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္
။ေနတိုးက ရခိုင္တိုင္းရင္းသားျဖစ္လို႔ သူ႔ရဲ႕ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုလည္း လိုအပ္တာေလးေတြ အၿမဲလုပ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ေနတိုးကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးေနတတ္ၿပီး တည္ၾကည္ခန႔္ညားလို႔ မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြက ေႂကြဆင္းေနရတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ေနတိုးက မိသားစုကိုလည္း လိုေလေသးမရွိေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ေပးၿပီး မိခင္ကိုလည္း စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ထားေပးတဲ့ သားလိမၼာေလးျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ေနတိုးတို႔မိသားစုဝင္ေတြအကုန္လုံးက ‌စိတ္ဓာတ္႐ိုးသားၾကၿပီး
ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနတတ္ၾကလို႔ လူခ်စ္လူခင္လည္းေပါမ်ားပါတယ္။အခုဆိုရင္လည္း ဒီဇိုင္နာ မင္းသက္စံက ေနတိုးတို႔အိမ္ကိုသြားၿပီး သီတင္းကြၽတ္အတြက္ ကန္ေတာ့ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ဒီဇိုင္နာမင္းသက္စံကေတာ့”သီတင္းကြၽတ္မွာ အေမ (အရီး) ၊အေဖ ၊အစ္ကို(ကိုေနတိုး) တို႔ကို သြားကန္ေတာ့တာပါ။ ဒီႏွစ္ဝါကြၽတ္မွာ ရတနာေတြ ထပ္ဝင္ေအာင္ လာဘ္ဖြင့္ တဲ့အေနနဲ႔ စိန္လက္စြပ္လက္ေဆာင္ အစ္ကိုနဲ႔ အေမတို႔ဆီက ရပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်။ေပ်ာ္စရာႀကီး …အဲ့ဒါ လာႂကြားတာ”ဆိုၿပီး အေပ်ာ္ေတြကို မွ်ေဝလာတာျဖစ္ပါတယ္။ေနတိုးတို႔မိသားစုကလည္း မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္လို ခ်စ္ခင္ရတဲ့ ဒီဇိုင္နာမင္းသက္စံကို ေမတၱာအျပည့္နဲ႔လက္ေဆာင္ျပန္ေပးလိုက္တာပါေနာ္။
နေတိုးတို့မိသားစုကို သွားကန်တော့တာ တန်ဖိုးကြီး စိန်လက်စွပ်တကွင်းလက်ဆောင်ရလာလို့ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဒီဇိုင်နာ မင်းသက်စံ…
အကယ်ဒမီမင်းသားချောတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နေတိုးကတော့ အနုပညာလောကမှာ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပြီး လူပျိုကြီးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်
။နေတိုးက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်လို့ သူ့ရဲ့မွေးရပ်ဇာတိဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလည်း လိုအပ်တာလေးတွေ အမြဲလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးကတော့ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ပြီး တည်ကြည်ခန့်ညားလို့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေက ကြွေဆင်းနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
နေတိုးက မိသားစုကိုလည်း လိုလေသေးမရှိအောင် ဂရုစိုက်ပေးပြီး မိခင်ကိုလည်း စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးတဲ့ သားလိမ္မာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။နေတိုးတို့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးက ‌စိတ်ဓာတ်ရိုးသားကြပြီး
အေးအေးချမ်းချမ်းနေတတ်ကြလို့ လူချစ်လူခင်လည်းပေါများပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်း ဒီဇိုင်နာ မင်းသက်စံက နေတိုးတို့အိမ်ကိုသွားပြီး သီတင်းကျွတ်အတွက် ကန်တော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဒီဇိုင်နာမင်းသက်စံကတော့”သီတင်းကျွတ်မှာ အမေ (အရီး) ၊အဖေ ၊အစ်ကို(ကိုနေတိုး) တို့ကို သွားကန်တော့တာပါ။ ဒီနှစ်ဝါကျွတ်မှာ ရတနာတွေ ထပ်ဝင်အောင် လာဘ်ဖွင့် တဲ့အနေနဲ့ စိန်လက်စွပ်လက်ဆောင် အစ်ကိုနဲ့ အမေတို့ဆီက ရပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ပျော်စရာကြီး …အဲ့ဒါ လာကြွားတာ”ဆိုပြီး အပျော်တွေကို မျှဝေလာတာဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးတို့မိသားစုကလည်း မိသားစုဝင်တစ်ယောက်လို ချစ်ခင်ရတဲ့ ဒီဇိုင်နာမင်းသက်စံကို မေတ္တာအပြည့်နဲ့လက်ဆောင်ပြန်ပေးလိုက်တာပါနော်။